Warshadda Birta Shiinaha iyo soosaarayaasha | Lead
Adeegga shaabadeynta biraha Lead Wuxi wuxuu isku daraa waaya aragnimada qalabkeena sameeya iyada oo aan u heellan nahay tayada si aan u soo saarno qaybo si kalsooni leh ula kulmaya heerka macaamiisheena. Adoo adeegsanaya qalab horumarineed iyo qalab labaad si aad u soo saarto qaybo yar iyo weyn
Adeegga shaabadeynta biraha Lead Wuxi wuxuu isku daraa waaya aragnimada qalabkeena sameeya iyada oo aan u heellan nahay tayada si aan u soo saarno qaybo si kalsooni leh ula kulmaya heerka macaamiisheena. Iyadoo la adeegsanayo qalab horumarineed iyo qalab labaad si loo soo saaro qaybo yar iyo weyn, waxaan awood u leenahay inaan si deg deg ah ugu soo celino noocyada horudhaca ah iyo wax soo saarka.
Ku tumashada birtu waa nidaam wax soo saar loo isticmaalo si loogu beddelo go'yaasha biraha fidsan qaabab gaar ah. Waa geeddi-socod adag oo ay ka mid noqon karaan dhowr farsamooyin sameynta bir ah - faaruqin, feer, qalooc iyo daloolin, si loo magacaabo wax yar.
Ku tumashada birtu waa geedi socod sameynta qabow oo adeegsanaya dhimashooyinka iyo tirtiridda saxaafadda si loogu beddelo birta xaashiyaha qaabab kala duwan. Cadad ka mid ah birta fidsan, oo sida caadiga ah loogu yeero meelaha bannaan, ayaa lagu quudiyaa saxanka birta lagu dhejiyo oo adeegsata qalab iyo dusha sare si ay biraha uga dhigto qaab cusub. Tas-hiilaadka wax soosaarka iyo kuwa been abuurka bixiya ee bixiya adeegyo shaabadi waxay dhigayaan sheyga in lagu shaabadeeyo inta udhaxeysa qaybaha dhinta, halkaas oo isticmaalka qaababka cadaadiska oo ay ku xirxirayaan walxaha qaabka ugu dambeeya ee la doonayo sheyga ama qeybta.
Waxaan bixinaa adeegyo shaabad bir ah si aan u gaarsiino qaybo ka mid ah warshadaha baabuurta, aerospace, caafimaadka, iyo suuqyada kale. Maaddaama suuqyada adduunku isbeddelayaan, waxaa sii kordhaysa baahida loo qabo qaybo badan oo isku dhafan oo si dhakhso leh loo soo saaro.
Ku tumashada birtu waa xal degdeg ah oo kharash-ku-ool ah oo loogu talagalay baahidan wax soo saar tiro badan. Soo-saareyaasha u baahan qaybaha biraha loo shaabadeeyey mashruuc guud ahaan waxay raadiyaan saddex sifo oo muhiim ah:
Aluminium, bir, bir bir ah, naxaas, naxaas, bir kaarboon yar, iwm
Kormeerka Qeybta 1aad, In-Geeddi-socod, Gabagabo
Muga wax soo saarka
Laga soo bilaabo noocyada halbeegga ah illaa mugga tobanaan-milyan oo xabbadood sanadkiiba.
Beeraha, Gawaarida, baabuurta, korantada, caafimaadka, qalabka guryaha, qalabka guryaha, mashiinada, iwm
Mashiinka CNC, Mashiinka CNC, Leexinta CNC, Bir xaashi, Dhamaaday, Qalabka, iwm
Xiga: Birta xaashida